Huawei 8600&8500 Firmware Update Problem! — MYSTERY ZILLION
Huawei 8600&8500 Firmware Update Problem!
huawei ၈၆၀၀ နဲ့ ၈၅၀၀ ဖုန်း တွေကို firmware မြှင့်ရင် error တစ်ချို့တက်နိုင်တယ်လို့ block တစ်ချို့မှာ ဖတ်ရပါတယ်။ firmware version 2.1 ကနေ 2.2.1 froyo ကိုမြှင့်တဲ့အခါ တစ်ချို့ဖုန်းတွေမှာ camera သုံးလို့မရတော့ဘူး ဆိုတာမျိုးနဲ့ version CM7-2.3.4 ကို မြှင့်ပြီးသုံးတာကြာလာရင် touch screen ကြောင်တဲ့ error တက်တတ်တယ် ဆိုတာမျိုးပါ။ ဒီလို ပြဿနာ မျိုး တွေ မဖြစ်အောင် version မမြှင့်ခင်ရှောင်သင့်ဆောင်သင့်တာလေးတွေသိချင်ပါတယ်။ ဥပမာဗျာ ၈၆၀၀ built number ၂၈၀ နဲ့ဆုံးရင် ၂.၂.၁ froyo ကို မြှင့် လို့မရဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့။ ၈၅၀၀ & ၈၆၀၀ ဘယ်အမျိုးအစားကversion မြှင့်ရင် camera error တက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်။ CM7-2.3.4 မြှင့်ရင် touch screen တစ်ကယ်ဘဲ ကြောင်လာနိုင်လား။ ဆရာ့..ဆရာ...များ ဝေဖန် အကြံ ပေးပါဦးဗျား...
I want to 2..3.3 firmware for c8800
don't you know 8800 is already exit 2.3.3!
minayerkyaw this is huawei 8600 firmware 2.3.5 gingerbread http://www.myanmarmobileapp.com/?p=1811
huawei c8800 2.3.3 original firmware http://www.myanmarmobileapp.com/2011/08/huawei-c8800-အတြက္-android-v2-3-original-firmware-ပါ/
ROM downloaded from mmdroid.com can successfully upgrade to 2.2.1 for C8500.
No trouble for camera, light sensitive buttons, 3g and wifi.
Download ROM >> http://cloud.mmdroid.com/5v9d
nothing happen in upgrade of CM7 on C8600 but unplug until5minutes
အကိုတို့ရေ ကျွန်တော့် ဖုန်းကို huawei 8600 firmware 2.3.5 gingerbread တင်လိုက်တာwifi မရေတာ့ဘူး
8600 firmware 2.3.5 has many problem for user. I advise you should replace your firmware to officially product. You can find original firmware for huawei devices at
www.myanmarmobileapp.com. I think originally firmware is only best for your huawei devices. Good luck for lyn_saidra.